About In Laws – အတ္တကျော်ရဲ့ စာပေါင်းစုံ
Author lettwebawPosted on 27 September 2010 30 March 2012 Categories Discussion, FM Broadcasts, Love & Marriage, Reproduction, Sound File, Talks
5 thoughts on “About In Laws”
ကောင်းလိုက်တဲ့ ဖြစ်ခြင်းဗျာ…။ အရမ်းကို မှတ်သားလောက်ပါ ပေတယ်….။ အခုတော့ မှတ်သား ထားလိုက်ဦးမယ်ဗျာ…။ နောက် အချိန်တန်တဲ့အခါ အသုံးချရအောင်လို့ပေါ့…..။
2 October 2010 at 12:01 pm
ဆရာ့အသံ ဒါပထမဆုံး နားထောင်ဖူးတာပါ။ စကားပြောတဲ့အသံ ၀ါကျအထားအသို အဖြတ်အတောက် အတော့်ကိုနားထောင်လို့ကောင်းပါတယ်ဆရာ။ အကြောင်းအရာလည်းမှတ်သားသွားပါတယ်။
ဆရာ လက်တန်းပြောတာလား။ စာရွက်ထဲမှာရေးပြီးမှ ပြန်ဖတ်ပြောရင်း အသံသွင်းတာလား။ ဆရာကြုံရင် အချိန်လေးများရခဲ့ရင် စကားပြောနည်းလဲ သမီးတို့ကို မျှဝေပေးပါဦး။
2 October 2010 at 10:36 pm
ရေးထားပြီးမှ ပြန်ဖတ်တာပါ။ အချိန် ဘာညာ ထည့်တွက်ရတာမို့ လက်တန်းပြောဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ စကားပြောတတ်ချင်ရင် အပြောကျင့်ဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ ဆရာ ငယ်ငယ်တုန်းက မြန်မာ့အသံ အင်္ဂလိပ်ပိုင်း အစီအစဉ်မှာ အစီအစဉ် ကြေညာသူ သိပ်ဖြစ်ချင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အရူးအမူး ကျင့်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ မြန်မာလို ပြောတဲ့အခါမှာလည်း အဲသလိုပဲ တအား လေ့ကျင့်ခဲ့တာပါပဲ။ သူများ ပြောပုံကို စူးစိုက်နားထောင်ပြီး မှတ်သားထား၊ အတုခိုးထားပြီး ကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့အခါမှာ အဲဒါတွေကို ချသုံးခဲ့တာပါ။ စကားကောင်းကောင်း ပြောတတ်ချင်ရင် စာများများ ဖတ်ဖို့လည်း လိုပါလိမ့်မယ်။
8 October 2010 at 6:31 pm
အသံအရမ်းနားထောင်းကောင်းတာ လက်ခံပါတယ်. တော်တော်ကို နားထောင်ကောင်းတာပါ
megaupload .. တို့လိုမျိုးပေါ့
Lily Htut says:
16 July 2011 at 3:37 am
Good share ,… kyut tel … 😀 I noted already sayar…. very good voice. this is the first time i listen.
Previous Previous post: Please don’t cry when I die
Next Next post: Many Years with My Old Flame